Warcusub Media - Sabti
Somaliland oo u Dabaal-degtey Sanguradedii 22-naad
Maanta oo kale deegaanada Somaliland sanad waliba waxay udabaal dagaan maalinta ay sheegteen inay ka go’een Somaliya inteeda kale taasi oo munaasabad lagu maamuusayey arintaas lagu qabtay ilinka hore ee Madaxtooyada Somaliland oo ku taalla magaalada Hargeysa.
Xaflada oo ahayd mid agaasimka ay waqti badan geliyeen ayaa waxa ka qeyb galay mas’uuliyiinta ugu sareysa maamulka Somaliland sida Axmed Siilaanyo oo ah Madaxweynaha maamulkaasi,Suleymaan Maxamuud Adan oo ah Gudoomiyaha Golaha guurtida,C/raxmaan Maxamed Cabdullaahi gudoomiyaha golaha Wakiilada,Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee Somaliland Dr Yuusuf Ismaaciil iyo Xubno kale.
Gaado ka ciyaar ciidamada iyo Ardayda Waxbarashada iyo qaar ka mid ah Ururada Bulshada ay Socod Ku mareen meesha Munaasabada ka dhaceysay ayaa waxa intaasi kadib khudbad dheer halkaasi ka jeediyey Madaxweynaha Maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo.
Waxa uu sheegay marka ugu horeysay Axmed Siilaanyo in dabaal deggan 22 sano kadib ay dhiig iyo juhdi badan usoo galeen hambalyana ujeediyey shacabka deegaanada Somaliland.
Waxa uu soo hadal qaaday arinta kusaabsan suurta galnimada mar kale inay Somaliya iyo Somaliland midoobaan isagoo sheegay in hore utijaabiyeen wixii ay gooni inay u istaagaan sababayna ay taagan tahay.
Khudbada Axmed Siilaanyo uu jeediyey Maanta waxa uu kaga hadlay dayaca iyo darxumada dhaqaale ee dadka Somaliland ku dhaqan ay ka cabanayaan sheegayna inay xukuumadiisa wax ka qaban doonto waqtiyada soo socda.
Waxa uu si maldahan uga hadlay arinta kusaabsan in beesha caalamka udiidan tahay aqoonsi ah inay ka madax banaanaadaan Somaliya hayeeshee ku celiyey mar kale in la tixgeliyo codsigooda ku aadan in la aqoonsado sida uu yiri.
WM.Muqdisho Wafdi ka socda Urur Goboleedka IGAD oo Kismaayo gaarey
Wararka ka imaanaya Magaalada Kismaayo ayaa sheegaya halkaasi goordhow inay gaareen Wafti balaaran oo ka socda Urur goboleedka IGAD Waftiga ayaa waxaa horboodaya Xoghaya Guud ee urur goboleedka IGAD Eng Maxbuub Macalin, waxaana goordhow lagu wadaa inay wada qaataan Kulamo Maamulka Jubbaland garabka Axmed Madoobe.
Ex Xildhibaan Hilowle oo kamid ah Masuuliyiinta qaabilay Waftiga IGAD ayaa u sheegay Saadaal media inay ka wada hadli doonaan arimo badan oo ku saabsan Jubbooyinka, waxaana lagu wadaa saacadaha soo socda inay halkaasi saxaafadda kula hadli doonaan. Waftiga ayaa la sheegey inay booqan doonaan xarunta jaamacadda Kismaayo iyagoo halkaas kula kulmi doona ergooyinka soo dhistey maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe ,waxan ay qiimeyn ku sameyn doonan sida ay u dhacday doorashada dhawaan ka dhacdey Kismaayo taaso lugu magacaabey madaxweynaha Jubbaland.
WM.Muqdisho Kaluumeysatada oo ka cabanaya Maraakibta shisheeye ee ku sugan Biyaha Somalia
biyaha wadanka Somalia waxaa kusugan maraakib shisheeye oo sheega in ay burcad badeed ka ilalinayaan heebaha dalkeena marakiibtaas waxaa ay aruursanayaan qayraaadka ala uu kumanaystay Somalia kuwaas oo dhanka kalena dhibatoyin aan lasoo koobi Karin kuhaya kalumaysatada somalida ah.
Hada meelaha ay marakiibtaas kusuganyihin waxaa kamid ah gobolada uu kataliyo mamulka butland waxana ay marakiibtu howlahoodii kaxanibeen kalumaysatada somalida ah ee kusugan deeganadas gar ahaan gobolka bari.
Mid kamid ah kalumaysataas oo lahadley voada ayaa sheegay in shaqa la,aan yihiin dadkii ku kalumaysan jiray 115 doonyood oo ay xanibeen marakiibta shisheeye ee kusugan biyaha Somalia waxaana uu kadalbaday mamulka butlad oo deeganas mamula in ay wax kaqabtaan xanibada lagu hayo kalumaysatada somaliyeed isaga oo sheegay in hadii ay wax kaqab wayan in ay qaadi doonan talabadii lasoo gudboonata.
Kooxa burcad badeda Somalia ayaa dad badan wada ogson yihiin ay falkas uu ku dhaliyay kadib markii ay dhibatoyin kala kulmeen marakibta shisheeye ee sida shaci darada ah uga kalumaysaanaya wadankeena inkasto jimciyada qurumaha kadhexeysa ay shegatay in biyaha Somalia aysan xad lahayn taas oo kadhigan in laga kalumaysan karo hadalkas oo dowlada somaiya aysan kadhiidhin.
WM.Muqdisho Video: Nordmenn om bunader, somaliere om 17 mai. Daawo
New Video: Waraysi lala yeeshay Xildhibaan Baashi iyo Jan Bøler. Daawo